USergio unezimvo eziyi-36 zezinye iindawo.
Ineendawo zokulala ezinomoya opholileyo kunye neTV kunye neWiFi yasimahla, iCasa Golia ikwindawo efanelekileyo. fair (2 km) - Iziko (4 km) - Il Cuoa (5 km) - isikhululo sikaloliwe - Amaziko okuthenga - Iiklabhu zasebusuku
Ehlotshiswe ngesitayela samanje kunye nesisulungekileyo, amagumbi abanzi asetyenziswa yindlu yokuhlambela enefestile eneshawa.
Indlu ineendawo zokupaka zabucala zasimahla.
Ilungele osebenza nabo, iintsapho kunye nezibini.
Le ndlu ibekwe kumgangatho we-3 isetyenziswa yi-lift kwisakhiwo samva nje.
Le ndlu inegumbi lokuhlala elinekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elineoveni, imicrowave, itoaster, ifriji, umatshini wokuhlamba izitya kunye nomatshini wokuhlamba.
Kukho amagumbi amabini okulala anokwenziwa ziibhedi ezi-2 zabantu abangatshatanga ukuba kukho imfuneko. Ilungele iindwendwe ezi-4. Igumbi lokuhlambela elinefestile elineshawa.
Indlu ibekwe kwindawo ngobuchule njengoko wakhonza kakuhle izithuthi zikawonke-phantsi indlu kukho yokumisa ibhasi esithungelanayo iindawo ezahlukeneyo zesixeko, kuquka: - I-fair (3.2 km) - Iziko (4.9 km) - Il Cuoa (6.6 km) - isikhululo sikaloliwe - Amaziko okuthenga - Iiklabhu zasebusuku
Amanyathelo ambalwa ukusuka ungafumana ivenkile enkulu, indawo yokutyela, iMcDonald's, i-pizzeria yokukhupha, ibha, i-beautician njl.
Ilungile njengesiqalo sohambo olunokufikelela ngokukhawuleza kwezona ndawo zinomtsalane esixekweni.
Ciao, mi chiamo Giorgia e sono una persona solare e socievole ecco perché ho deciso di mettere a disposizione la mia casa per ospitare persone dal tutto il mondo!! Non vedo l’ora d…
Ngexesha lokungena siya kukucela amaxwebhu esazisi sokubhaliswa kunye nerhafu yedolophu kaMasipala waseVicenza ye-€ 2.50 ngondwendwe ngobusuku ukuya kuthi ga kwi-5 ubusuku obuninzi, ngaphandle kwangaphandle okubonelelwe ngummiselo.
Ukufumaneka kunye nokufumaneka okuphezulu kulo naluphi na uhlobo lwengxaki okanye iingcebiso zokuhlala. Iilwimi zonxibelelwano: isiTaliyane, isiNgesi, iSpanish.
Ngexesha lokungena siya kukucela amaxwebhu esazisi sokubhaliswa kunye nerhafu yedolophu kaMasipala waseVicenza ye-€ 2.50 ngondwendwe ngobusuku ukuya kuthi ga kwi-5 ubusuku obuninzi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vicenza